Ny Tantara - DingQi Pack Co., Ltd.
Tamin'ny taona vitsivitsy lasa izay fa Sam hoo sy Lydia Chen fantany tao Shenzhen. Tamin'izany andro izany, Sam hoo nianatra simia ho an'ny mari-pahaizana maîtrise tao Shenzhen University. Lydia Chen dia fivarotana mpitantana ny orinasa flexiable fonosana. Indray andro, Lydia Chen maka santionany any Shenzhen paosy oniversite. Sam hoo tao miandraikitra ny mizaha toetra ny fananana ara-batana sy simika. Sam hoo nilaza fahalalana maro momba ny fitiliana. Lydia mizara maro fampiharana ny paosy fonosana. Samy amin'izy ireo dia tena liana amin'ny fonosana, satria dia afaka foana pouches zavatra nofo ela. Samy tia ny fonosana orinasa. Manana nofy mba hanome ny gadona fonosana ny olona eto amin'izao tontolo izao.
Sam hoo sy Lydia Chen haingana ho namana tsara. Taona vitsy lasa. Sam hoo sy Lydia ampy petra-bola sy ny teknolojia. Izy ireo manapa-kevitra ny creat ny fonosana orinasa hanome flexiable fonosana paosy ny olona eto amin'izao tontolo izao. Shenzhen DingQi Pack Co., Limited teraka, nikasa hanome ny tsara indrindra mba mankid fonosana vokatra eto amin'izao tontolo izao. Ny nofy no tanteraka!
Ahoana no mba hanome ny tsara indrindra fonosana vokatra? Sam hoo sy Lydia mihevitra fa zava-dehibe voalohany dia ny tsara manta ampy mpamatsy ara-nofo. Ka dia manapa-kevitra ny hizaha toetra akora rehetra namatsy any Shina. Mba hahazoana antontan-kevitra exaclty. Sam hoo manapa-kevitra fitsapana ara-nofo manta mampiasa ny fitaovana fitsapana mandroso ny Shenzhen amin'ny oniversite, izay ampy ho an'ny fikarohana siantifika marina. Taorian'ny-jatony-pitsapana, mifidy telo manta mpamatsy ara-nofo. Manta rehetra ireo zavatra ireo toetra hatrany. Manana fampisehoana ara-batana tsara dia tsara toy ny tena mahery porofo hamandoana. Inona no manan-danja indrindra. Tsy manana zavatra simika mampidi-doza, tena sakafo kilasy, FDA fenitra.
Avy manta ara-nofo ny paosy, ny fomba fandraisana manta fitaovana tsara fonosana vokatra. Machine ihany koa zava-dehibe. Koa nanapa-kevitra ny hanafatra Company nandroso milina, toy ny milina fanontam-pirinty, Laminated milina sady niteti milina. Advance milina afaka aoka ny dingan'ny paosy manao ampy hatrany.
Ny zava-dehibe fahatelo dia ny injeniera ny fanaovana paosy. Tsy mandrisika hanaraka fananana tahiry
mba hisarihana ny manam-pahaizana ao amin'ny fonosana orinasa mba hifehy ny paosy sy ny dingana fanaovana fanamarinana kalitao.
Mamorona hatrany izy ireo fanaraha-maso quolity methord rehefa afaka herintaona.
Tena faly izahay handray lehibe famerenana tsara avy amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao isan'andro. Rehefa mpanjifa milaza amintsika fa tena afa-po amin 'ny pouches sy ny toy izany no tsara indrindra fonosana paosy izy ireo baiko, dia nianjera tena ny avonavona. Ho hiasa mafy kokoa ny hamela bebe kokoa ny olona mankafy ny fonosana vokatra tsara dia tsara.
Clear Plastic Mijoroa Up Pouches , Kraft Paper Resealable Bags , Mijoroa paosy Bags , Clear Mijoroa Up Pouches , Mijoroa Up paosy fonosana plastika , Mijoroa paosy fonosana ,